Warbixin: Maxaad ka taqaanaa Catalans? iyo Catalonia oo Madaxbanaani ku dhaawaaqday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Warbixin: Maxaad ka taqaanaa Catalans? iyo Catalonia oo Madaxbanaani ku...
Warbixin: Maxaad ka taqaanaa Catalans? iyo Catalonia oo Madaxbanaani ku dhaawaaqday
MUQDISHO, Soomaaliya (Xaqiiqa Times) October 27/2017:- Gobalka ugu Qanisan dalka Spain ee Catalonia ayaa maanta oo Jimco ah Ku dhawaaqay inay ka go’een Spain inteeda kale ka dib markii fadhi Baarlamaanka gobalkaasi maanta uu Ku yeeshay magaalada Barcelona ay u codeeyeen gooni isu taaga gobalka.
Toddobaatan xildhibaan ayaa u codeeyay gooni isu taagga Catalonia, 10 xildhibaan ayaa diiday halka labo xildhibaana codadkooda la tuuray.
Go’aankan ayaa Baarlamaanka gobalka Catalonia uu qaatay ka dib markii cod qarsoodi ah xildhibaanadu ay u qaadeen aftidii dadwayne ee gobalka ka dhacday.
Codaynta qarsoodiga ah ayaa lagu qabtay magaalada Barcelona galabnimada maanta oo Jimco ah.
Xildhibaanada u codeeyay go’itaanka Catalonia ayaa magacyadooda la qariyay, ayadoo Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka Spain uu balan qaaday in dacwo uu ku soo oogi doono xildhibaanada u codeeyay gooni isu taagga.
Dowladda dhexe ee Spain
Ka dib Ku dhawaaqista madaxbanaanida Catalonia, dowladda dhexe ee Spain ayaa u codaysay qodobka 155 ee dastuurka dalkaasi kaasi oo dowladda dhexe u ogolaanaya in gebi ahaanba la baabi’yo is-maamulka reer Catalan islamarkaana u fasaxaya in xukun toos ah lagu soo rogo gobalka Catalonia.
Xisbiyada dhanka Middig ee ka jira Catalonia oo ay ka mid yihiin xisbiga Muwaadiniinta ee (Cs) iyo Xisbiga dadka ee People’s Party (PP), oo uu la jiro xisbiga Biddixda dhexe ee centre-left Socialist Party of Catalonia (PSC), ayaa isaga baxay kulanka Baarlamaanka reer Catalan ay uga dhawaaqayeen madaxbanaanidooda.
Madaxwaynaha xisbiga muwaadiniinta ee gobalka Catalonia Albert Rivera ayaa codbixinta madaxbanaanida Ku tilmaamay mid “Sharci daro ah.
Ka dib codka madaxbanaanida Catalonia, Ra’iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy (Mariyano Rahoy) ayaa dadka waydiistay inay is-dajiyaan.
“Kala saraynta Sharciga ayaa lagu soo dabaalayaa isaga ayaana sheegaya Xalaalnimada Catalonia” ayuu Mr Rajoy ku yiri war uu soo dhigay barta Twitter-ka.
Xilli hore maanta oo Jimco ah ayaa Ra’iisul wasaare Rajoy khudbad uu ka jeediyay aqalka Sanedka (Senate) waxaa uu sheegay in madaxwaynaha gobalka Catalonia uu yahay qofka kaliya ee mas’uulka ka ah arinta madaxbanaanida gobalka.
Waxaa uu sheegay in halista reer Catalan ay wajahayaan inaysan ahayn qodobka Dastuuriga ah ee 155 ee halista ay ka imaanayso dowlad gobaleedka Catalonia.
Dowladda Spain oo ah dowlad awood leh kana tirsan midowga Yurub ayaa xukun toos ah kusoo rogtay gobalka Catalonia taasi oo meesha ka saaraysa ismaamul gobaleedka.
Midowga yurub oo dhankooda ka hadlay mushkiladda ka taagan dalka Spain ayaad mooddaa inay taageersan yihiin dowladda dhexe ee dalkaasi islamarkaana ay indhaha ka qabsadeen aftidii 2 milyan oo qof ay Ku go’aansadeen inay Spain ka go’aan inkastoo Sharcinimada aftida lafteeda markii hore.
Madaxwaynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk, ayaa sheegay in Mowqifka midowga Yurub ee aan waxba iska badalin, isagoo intaas Ku daray in wadaxaajoodku aanu ahayn mid la qasban karo.
Maxaad ka taqaanaa Catalonia?
Catalonia, waa gobal ku yaala dhinaca Waqooyi barri ee dalka Spain waxaana uu leeyahay tiro dad oo gaaraya 7.5 milyan oo ruux, waana 15% tirada ay ka yihiin dadka reer Spain. Dhaqaale ahaan waxaa ay guud ahaan dhaqaalaha dalka 20% uu kasoo xarooda gobalka Catalonia.
Catalans, waa dadka Ku nool waxa loo yaqaano “Paisos Catalans ” oo loola jeedo Jamhuuriyadaha Catalan. Waxaa ka mid ah Valencia, Jaziiradaha loo yaqaano Balearic Islands, qayb ka ah gobalka Spain Ku yaala ee Aragon, Roussillon oo Ku yaala koonfurta Barri ee dalka Faransiiska iyo waliba Catalonia.
Waa dad wadaaga dhaqan iyo Taariikh.
Dadka ugu caansan ee reer Catalan ayaa waxaa ka mid ah Salvador Dali, Antoni Gaudi, Joan Miro, Ferran Adria and Pep Guardiola.
Previous articleWasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya oo Ankara kula kulmay wasiirka A. Gudaha Turkiga
Next articleMadaxwaynaha oo ka hadlay weerarkii Naasa-hablood 2